Dib u eegis: 'Wraith' wuxuu ku dhuftey Video-ga Guriga ee Turbo Vestron Video Blu-Ray ayaa lagu soo oogay - iHorror
Bogga ugu weyn Blu Rays Dib u eegis: 'Wraith' wuxuu ku dhuftaa Video-ga Guriga oo leh 'Turbo Charger Vestron Video Blu-Ray'
Blu RaysWarar Naxdin LehFilimooyin naxdin leh
Dib u eegis: 'Wraith' wuxuu ku dhuftaa Video-ga Guriga oo leh 'Turbo Charger Vestron Video Blu-Ray'
by Jacob Davison July 20, 2021
Nooc cusub oo cusub oo ka soo baxay Lionsgate's Vestron Video Collector's Taxanaha ayaa gubanaaya cinjir waxayna ku imaanayaan blu-ray iyo digital! Cibaadada 1986 tartankii aargudashada filim cabsi leh Wraith ayaa ka soo laabanaysa meelo ka baxsan si ay uga hesho dhagaystayaal cusub boostadayada Deg Deg Ah Oo Cadho Badan bulshada iyo sii deynta fiidiyaha cusub ee guriga waxaa ka buuxa noocyo kala duwan oo muuqaalo ah.
Sawir ahaan Lionsgate
Wraith waxaa la dhigay magaalada yar ee koonfurta galbeed ee lama degaanka ah ee Brooks, taas oo noqon laheyd meel kufiican in lagu noolaado… hadaanay ahaan lahayn kooxaha rabshadaha wata ee wadada gala. Uu hogaaminayo naxariis laawe Packard (John Cassavetes), shaqaalihiisa basaska wadooyinku waxay gaaf wareegayaan jidadka waaweyn dhibbanayaasha si arxan daro ah iyo gawaarida inay wax jaraan. Dhibbanayaashoodii ugu dambeeyay wuxuu ahaa saaxiibkii Keri (Sherilyn Fenn) kahor intaan darawal gaashaaman oo gaashaaman oo gawaadhida koofiyadda sare leh ee Dodge Turbo Interceptor uusan imaan oo uu qaado feeraha wadada dhinaceeda… ilaa dhimashada. Hadda waa tartan ka dhan ah saacadda maaddaama burcadda mid mid loo dilayo oo la ogaanayo qarsoodiga Wraith iyo xiriirka ay la leedahay ninka cusub ee magaalada, Jake (Charlie Sheen).
Wraith waa filim qurux badan oo xiiso leh oo iskutallaab ku ah nooc gaar ah waqtigiisa. Isku-dhafka qariibka ah ee jacaylka dhalinyarada qaangaarka ah, aargudashada aan caadiga ahayn, iyo jahwareerka gawaarida, way taagan tahay xitaa maanta. Oo laga soo bilaabo xilligii CGI kahor, gawaaridan gawaarida ah ayaa boqolkiiba boqol xalaal ah oo madadaalo ku filan si ay iskood ugu daawadaan cidlada Arizona. Oo maxaa tuuray! Marka laga soo tago kuwii hore loo soo sheegay sidoo kale waxaad leedahay Randy Quaid qarxis ah oo ah sheriff iyo dabeecad joogta ah Clint Howard oo ah Eraserhead maskaxda ka fiirinaya burcadda wadada. Sheekadu waa mid yar oo la jaray oo qalalan, laakiin si yaab leh ayaa loo toogtay waxayna leedahay farxad ku filan si ay kuugu mashquuliso.
Sidii caadada u ahaydba, Vestron Video ayaa ku sii daayay sii deyntaan qarka u saaran astaamo gaar ah oo la daboolay. Isla markiiba fiidmeerta, waxaad haysataa laba nooc oo faallooyin maqal ah. Mid ka mid ah qoraaga / agaasimaha Mike Marvin iyo mid kale oo leh jilayaasha Dave Sherrill iyo Jamie Bozian. Waxaa jira faafitaan wanaagsan oo wareysiyo shaqsi ah oo ay ku jiraan mid-mid-mid ah oo uu la yeeshay Mike Mrvin oo ka sheekeeynaya sameynta filimka, musiibadii dhacday markii qof dhinto inta lagu gudajiray, iyo soo nooleyntiisa iyo heerka cibaadada ee Wraith. Wareysi lala yeelanayo Clint Howard oo ku saabsan doorkiisa iyo wareysiyo lala yeesho isuduwaha mayalka adag Buddy Joe Hooker, isku duwaha gaadiidka Gary Hellerstein, iyo soo saaraha VFX Peter Kuran iyo VFX animator animation Kevin Kutchaver.
Wareysiyada marka laga tago, waxaa jira muuqaal weyn oo nus saac ah oo ka hadlaya goobaha toogashada Wraith ka dib iyo hadda magaalada Phoenix, Arizona, dhibco goos goos ah oo muuqaal ah, isku xigxiga cinwaan kale, sawirada sawirada, iyo isjiidka / dhibcaha TV-ga. Sidii aan idhi, baabuurkan waxaa ka buuxa dhammaan astaamaha. Marka, haddii aad niyadda ku hayso xoogaa rabshado baabuur oo muuqaal ah, laga yaabee inaad siiso Wraith raacid.
Wraith ayaa hadda laga heli karaa raajada iyo dijitaalka.
1980s2021Blu-RayCharlie SheenClint HowardNick CassavetesReviewWraithVestron Video
Jacob Davison waa qoraa cabsida ku saleysan oo ku saleysan Los Angeles, Eye On Horror co-host, iyo jecel wax walba nooc. Wuxuu uruuriyaa ku dhowaad inta filim ee uu daawaday.
James Wan, Warner Bros. Sii dayn argagax leh 'Trailer' Malignant '
'Jackass Forever' Trailer wuxuu keenayaa maan la'aan aan badnayn